Sri Lanka : Lasa Ohatra Mahatsiravin’ny Herisetran’ny Mpitandro Filaminana Ny Famonoana Ireo Tanora Roa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Desambra 2016 2:54 GMT
Tao amin'ny Groundviews, ilay tranonkala fanaovan-gazetin'ny olom-pirenena nahazo loka tany Sri Lanka, no nivoahan'ity lahatsoratra nosoratan'i Raisa Wickrematunge ity voalohany. Nisy fandikàna natonta navoaka ito ambany ito ho ampahany amin'ny fifanekena fifampizaràna votoaty amin'ny Global Voices.
Ny Alatsinainy 24 Oktobra sy ny Talata 25 Oktobra 2016, naneno tsy nisy nandray ilay laharana findain'ny Inspektera Jeneralin'ny mpitandro filaminana, Pujith Jayasundera, vao nampahafantarina ny vahoaka volana vitsivitsy lasa monja izay.
Nantsoina izy noho ny fitifirana ireo tanora roa, Natarajan 23 taona sy Pounraj Sulakshan 24 taona, izay nandeha moto ary tsy nijanona rehefa nosakànan'ny mpitandro filaminana teo amin'ny sampanan-dàlan'i Kulappidi any Kankesanthurai, distrikan'i Jaffina, Faritany Avaratra, Sri Lanka.
Rehefa tsy nijanona izy ireo, dia nisy poa-basy nanako. Niaiky ny mpitondra tenin'ny mpitandro filaminana tao amin'ny haino aman-jery fa nahitàna bala tao amin'ny vatan'ny anankiray tamin'ireo mpitaingina moto araka ny tatitra tamin'ny fandidiana ny fatin'izy ireo — na dia nezahan'ny mpitandro filaminana aza ny nanambara hoe loza no nisy.
Nambaran'ny Filohan'ny Fikambanan'ny Mpianatra ao amin'ny sampam-pampianarana Kanton'ny Oniversiten'i Jaffna, K. Rajeevan tao amin'ny gazety rahavavy Maatram ny fomba nanafenan'ny mpitandro filaminana ilay loza tany am-boalohany. Nilaza i Rajeevan fa tsy tany Jaffna tamin'io fotoana io, fa nankany amin'ny hopitaly fotoana fohy tato aoriana.
Raha niangavy mpianatra anankiroa ny mpitandro ny filaminana hiaraka aminy ho any amin'ny hopitaly mba hamantatra an'i Gajan sy Sulakshan, dia tsy nasehony an-dry zareo mihitsy ny vatan'izy roa lahy ireo, tamin'ny voalohany hoy i Rajeevan. Mandra-pahafolaky ny andro dia nolazain'ny mpitandro filaminana fa loza tsy nahy izany.
Ny hariva vao nilazan'ny mpitandro filaminana ny ray aman-drenin'i Kajan sy Sulakshan fa nanao hadisoana goavana ry zareo, ary niaky ry zareo fa nisy ny fitifirana. Noraisin'ny mpitandro filaminana an-tànana ny lany tamin'ny fandevenana, hoy i Rajeevan, sady nampiany fa noterena ny fianakaviana hanao ny fandevenana haingana.
Manampahefana dimy tao amin'ny polisy no noroahana avy hatrany, rehefa fanta-bahoaka ilay raharaha, isaorana ireo nahita maso.
Voalazan'ny tatitra voalohany fa nandeha mafy ireto mpianatra ireto ary tsy nijanona teo amin'ny mpitandro filaminana, izay nitifitra avy eo. Maromaro ny tifitra nahazo ilay mpitaingina moto, Sulakshan, ka tsy voafehiny intsony ny familiana ilay moto, izay nitsoraka tany aminà rindrina sisin-dàlana ka nahatonga ny ratra mafy ho an'i Kajan, izay maty fotoana fohy taorian'izay.
Taorian'ireo fahafatesana ireo, nirongatra ny hatezerana. Mpianatra avy any amin'ny Oniversiten'i Jaffna maherin'ny 2.000 no nanakana ny làlana A9, talohan'ny nanolorany ny lisitry ny fangatahana. Tsindrio eto ambany raha hamaky ny lisitra feno :
Lahatsoratra manontolon'ny fanambaran'ny Fikambanan'ny Mpianatry ny Oniversiten'i Jaffna momba ny fahafatesan'ireo mpianatra roalahy ny 20/10/2016
“Raha ny mpitandro filaminana no mahavita izany, iza no andrasantsika hanome ny rariny ?” hoy ny fanontanian'i Rajevan.
Nandritra izany fotoana izany, dia nitaky onitra sy fanadihadiana tsy anavahana ho an'ireo fianakaviana ireo ny filohan'ny Sri Lanka :
Tamin'alahelo lehibe no nandrenesako ny vaovao momba ny fahafatesan'ireo mpianatra anankiroan'i Jaffna. Didìako ny onitra sy ny fanadihadiana tsy miankina avy hatrany
Tsy nampino ireo mpisera amin'ny haino aman-jery sosialy izany, indrindra fa efa hita izao ny vokany :
Inona no hevitr'izany amin'ny firenena raha ny filoha mpanatanteraka no mibaiko ny mpitandro filaminana hanatanteraka fanadihadiana tsy manavaka amina heloka bevava iray ?
Mpianatra tao amin'ny Oniversiten'i Jaffna tao amin'ny sampam-pampianarana Kanto — trano mangina sy voalokaloka ary misokatra amin'ny lafiny efatra– i Kajan sy i Sulakshan. Naniry ny ho mpilalao sarimihetsika i Sulakshan, ary nandray anjara tamin'ny tantara kely mampihomehy atao hoe “Ulcer”, fifaninanana nampanaovin'ny The 48 Hour Film Project
Foana ny tanànan'i Jaffna ny ampitson'ny fandevenana ireo mpianatra roa, satria niantso hartal (fitokonana faobe) ny mponina.
#Jaffna tanàna maty
Na teo aza izany, dia nambaran'i Mervin Silva, minisitra taloha fa “maika loatra hanafaingana ny fitsarana ” ireo mpitandro filaminana ny olona.
“Tokony hijanona eo amin'ny fanakanan-dàlana fanarahamaso ihany koa aho, rehefa angatahana” hoy izy tamin'ny haino aman-jery.
Ny fanontaniana tsy voalaza dia izao, nety nitifitra ve ireo mpitandro filaminana raha toa ka nifidy ny tsy hijanona ilay minisitra taloha ?
Novakian'ny minisitry ny Didy aman-dalàna Sagala Ratnayaka, tao amin'ny Parlemanta ny fitantaran'ny mpitandro filaminana ilay zava-nitranga, izay nahatifirana ireo mpianatra ” raha toa ka tifi-danitra no nezahana natao “.
Ho an'ny maro, tsy resaka iadian-kevitra fotsiny ny fihetsiky ny mpitandro filaminana, fa ho melohina ihany koa. ” Tsy amim-piheverana ny fihetsiky ny mpitandro filaminana, ary antenainay fa mety ho voavahan'ny fitsarana io olana io,” hoy ny minisitry ny Fiarahan'ny vovonam-pirenena sy ny Fiteny Ofisialy, Mano Ganesan. Nohamafisiny fa ananan'ny mpitandro filaminana ny moto 1000 cc izay afaka nisongona mora foana ny moto nampiasain'ireo mpianatra anankiroa
Notsindrian'ny Minisitry ny Parlemanta ho an'ny Tamil National Alliance, M A Sumanthiran fa ny mpitondra ilay moto no voatifitra fa tsy ilay nentina tato aoriana, midika izany fa avy aty anoloana ilay tifitra. Izay no mety ho niseho raha tsy nijanona i Kajan sy Sulakshan, ilay mpitandro filaminana taty anoloan'ny sakan-dàlana no nitifitra. “Tezitra ny fikambanan'ny mpianatra. Tsy ny tany Jaffna ihany fa manerana ny firenena. Na ireo oniversite tany atsimo aza dia nanatevin-daharana ary naneho ny ahiahiny,” hoy izy nanampy.
Nisy akony hatrany amin'ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena izany fihetseham-po izany.” Ny tena mankarary ahy indrindra dia, hatrany am-boalohany, nanao izay fomba rehetra hanafenana na hanamarina ny asa antsirambina sy mahatsiravina nataony ny mpitandro filaminana,” hoy ilay mpikatroka mafana fo Marisa de Silva.
“Ny mpitandro filaminana no itodihan'ny olona rehefa misy manjo azy ireo. Matoky ny mpitandro filaminana isika amin'ny filaminantsika ary tahaka ny loharanom-piarovana [iray] ho ahitantsika [an-dry zareo]. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fahatokian'ny tanora ny mpitandro filaminana. Na izany aza, maro amin'ireo trangan-javatra izay niseho nandritra ny taona maro no tena nampiahiahy ireo tanora amin'ny maha-andrim-panjakana azy,” hoy ny fanamarihan'i Senel Wanniarachchi, mpikambana ao amin'ny vondron'ny tanora Hashtag Generation.
Who do you call, when police murder? #SriLanka #Lka @SriLankapic.twitter.com/wKzhCg4Ik9
Iza no antsoinao, raha mpamono olona ny mpitandro filaminana ?
Tsy ho ela dia hanjavozavo ny tsipika manelanelana ny hatezerana sy ny herisetra. Tany Kilinochchi, nisy ny disadisa teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoka. Tany Jaffna, tanora telo no voalaza fa naiditra hopitaly taorian'ny fanafihana nataon'olon-tsy fantatra.
Niangavy fahatoniana ao anaty tontolo miha-mikorontana ny filoham-panjakana Wigneswaran.
Tsy isalasalàna fa Zava-dehibe ny famerenana ny fitoniana, sy tsy hisian'ny herisetra intsony. Na izany aza, tokony ho sainina ireo hetsi-panoherana izay niparitaka hatrany any avaratra ka hatrany atsimo. Tsy fanambarana firaisankina fotsiny ireny — fa taratry ny fahamarinana izay vitsy no sahy milaza azy ampahibemaso.
Tsy nijanona tany amin'ny tapany avaratry ny firenena ny habibian'ireo mpitandro filaminana — tany Weliweriya tamin'ny 2013, ohatra, notifirin'ny mpitandro filaminana ireo mponina nanao fihetsiketsehana noho ny tsy fahampian'ny rano. Telo taona aty aoriana vao nolazain'ny mpitsara fa heloka bevava ilay fitifirana. Tany Pasyala tamin'ny 2014, matin'ny tifitra nataon'ny mpitandro filaminana ihany koa i Subhash Indika Jayasinghe nandritra ny fiatoan'ny fifamoivoizana. Nitaky fanadihadiana tsy miankina momba ilay zava-nitranga ny Komisiona Aziatika momba ny zon'olomelona.Tany Divulapitiya, S.M Kelum Subasinghe, 19 taona no voatifitra teny an-dàlana hody rehefa avy namonjy mariazy — na dia voalaza aza fa nanambana antsy ny mpitandro filaminana izay nanakana ny fiarany izy, tamin'ity tranga ity.
Notaterina fa naharay fitarainana 752 momba ny mpitandro filaminana ny Komisiona nasionalin'ny mpitandro filaminana tao anatin'ny telo volana monja — nanomboka ny 21 Oktobra 2015 ka hatramin'ny Janoary 2016. Ny ankamaroan'ireny fitarainana ireny dia mampiseho fiangarana, fanararaotam-pahefana, ary ny asa antsirambin'ny mpitandro filaminana — fa mbola voafatotra amin'izany ihany ny tànan'ilay Komisiona, satria ny mikasika ny raharaha anatiny ihany no iasàny, fa tsy ny momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona.
Noho ireo herisetra, mandritra ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy ny fakàna am-bavany ataon'ny mpitandro filaminana, tranga tsapa manerana an'i Sri Lanka, dia mitombo isa hatrany ny anton'ireo hetsi-panoherana. Midika izany fa lasa ohatra mahatsiravin'ny olana iray goavana izay tokony ho dinihina ny an'i Kajan sy Sulakshan.
Tao amin'ny Groundviews, ilay tranonkala fanaovan-gazetin'ny olom-pirenena nahazo loka tany Sri Lanka, ity lahatsoratra nosoratan'i Raisa Wickrematunge ity no nivoaka voalohany. Misy dika navoaka eto ho ampahany amin'ny fifanekena fifampizaràna votoaty amin'ny Global Voices.